Five the best ephaketheni-sized Smartphones - Izindaba Rule
Five the best ephaketheni-sized Smartphones
Lesi sihloko osesikhundleni “Five the best ephaketheni-sized Smartphones” kwalotshwa Samuel Gibbs, ngoba theguardian.com ngoLwesibili 17th November 2015 07.00 UTC
Kulo nyaka bekulokhu best yet for Smartphones, nge izici eziwusizo, imiklamo okungcono futhi software okuningi improved. Kodwa kungcono futhi yaba onyakeni lapho uye wafakazela nakho esiqongweni akudingeki ukuba abiza dollar phezulu futhi Smartphones ezinhle akudingeki ukuba ube izikrini omkhulu.
Nakhu a look esheshayo amahlanu Smartphones ezekhethelo ukuthi ngeke welule isandla sakho.
The Sony Xperia Z5 Compact 23-megapixel ikhamera Sony kakhulu kodwa. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Iwuhlelo phone Sony elincane has a screen 4.6in ecaleni compact eyenza kube smartphone enamandla kakhulu ezincane okwamanje. A fast and enembile zeminwe Enani efihla ngaphansi inkinobho amandla esandleni sokudla ifoni, ngakho asikho isidingo ngifake umunwe wakho inkinobho ekhaya ukuvula idivayisi yakho.
The new 23-megapixel ikhamera Sony best okwamanje, futhi mhlawumbe omunye the best kuyatholakala. Kuthatha microSD memori khadi yokwengeza isitoreji esengeziwe futhi ifoni amanzi ukuze ekujuleni 1.5m for 30 amaminithi, okusho uhambo phansi loo akukhona ukuphela kwezwe.
Kodwa usuku ezintathu-ukuphila kwayo konke ibhethri yinkulumo killer. Lona waqopha obuhlala ephezulu smartphone etholakalayo okwamanje.
Isinqumo: a enamandla, smartphone entweni engangeni manzi ehlala izinsuku ezintathu phakathi amacala
Sony Xperia Z5 ukubuyekeza Compact: kunjalo the best smartphone ezincane
Mncane, ukukhanya futhi fast: Samsung Galaxy S6. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
The Galaxy S6 okokuqala premium-umuzwa iwuhlelo smartphone Samsung ngayo i-metal yonke namabhodlela umzimba, futhi a big step up in design kusho manje olufana mncintiswano.
Kuba esheshayo umuzwa smartphone okwamanje, Ukuzipha phakathi zokusebenza kanye ovuthayo ngokusebenzisa imidlalo. It has a elikhulu 16-megapixel ikhamera ukuthi uphakathi the best laphaya, a fantastic 5.1in 2K screen, futhi kungcono lighter ohlabayo kanye kuka izimbangi zayo.
A zeminwe inzwa ngaphansi inkinobho ekhaya ovula ifoni futhi kungaba ukugunyaza izinkokhelo. It waqala okungenazintambo nebhethri ngokwanele ukuze abone imini.
Isinqumo: esheshayo umuzwa smartphone nje iwavale kanye
Samsung Galaxy S6 ukubuyekeza: iPhone killer
Amagama 70% Ngokushesha, new finger ukuphrinta Enani - kodwa ukuphila abampofu battery kukuvumela Apple iPhone 6s phansi. Photograph: Kiichiro Sato / AP
I iPhone 6s yilona 4.7in model yakamuva kusuka Apple, futhi omunye Smartphones best ezincane etholakalayo. Kuba enkulu ukudayisa sici ingcindezi screen sensitive, okuvumela kunyakata kwemtimba amasha ikhamera 12-megapixel ukuthi kungaba thatha Live Ama ifotho - namanje anqume kuhlangene iDemo video shot ngesikhathi esifanayo.
Isidumbu metal manje eyenziwe a aluminium nzima ukuthi kunciphisa imihuzuko. It processor kuyinto 70% ngokushesha kunokuba ngonyaka odlule. Apple new Touch ID zeminwe Enani cishe leso, ngenkathi Engine yayo entsha Taptic kuveza impendulo enkulu staccato isixwayisi.
Kuba embi ngalo enkulu a battery ukuthi ngeke kuhlale usuku, okusho cishe uzoba ukuze ishaje emini futhi lathi lishona.
Isinqumo: ifoni encane omkhulu zonakala ukuphila kwabampofu ibhethri
iPhone 6s ukubuyekeza: ifoni enhle kakhulu zonakala ukuphila kwebhetri inkunkuma
Akukho bloat-Nexus 5X. Photograph: Justin Sullivan / Getty Images
zakamuva non-phablet iwuhlelo ye-Google, -Nexus 5X, kuyinto owalandela-Nexus ethandwa 5 kusukela 2013.
It has a screen omuhle 5.2in, mncane futhi ukukhanya futhi omunye Smartphones wokuqala ukugijima version yakamuva ye-Android 6.0 Marshmallow. ifoni, eyenziwe LG ye-Google, uyagijima Android indlela giant search wayehlose, ngaphandle bloatware futhi ngeke uthole izibuyekezo software ngaphambi yini enye.
A fast and olunembile zeminwe inzwa ngemuva kuvumelana ngokwemvelo ngaphansi Inkomba yakho ngomunwe ukutherhula ifoni yakho bese uqinisekisa izinkokhelo. It Ubuye a USB uhlobo-C port, okusho ikhebula kungenziwa ixhunyiwe ku noma kunjalo kuze ukushaja. Ibhethri ihlala mayelana ngosuku, kodwa hhayi okuningi.
Ikhamera ingenye the best emakethe futhi kulula ukuyisebenzisa ukuze adonse izithombe ezinkulu.
Isinqumo: fast, ukukhanya and bloat-free, indlela i-Google ayehlose
Google Nexus 5X ukubuyekeza: Ifoni abantu sika Android?
okwesithathu lucky ... yakamuva Moto G Motorola sika. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Samsung sika oyisizukulwane sesithathu Moto G is nkulu okwamanje, futhi iyona engcono bonke-round smartphone ngaphansi £ 200.
It uyagijima Android ngaphandle kokushintshwa, kuyinto snappier ukwedlula mncintiswano futhi uthola izinto eziyisisekelo kwesokudla. Ibhethri ihlala isikhathi nosuku oluhle, more nge ukusetshenziswa ukukhanya, futhi lokho kuyajabulisa naphezu kokuba kubonakale obukhulu ngokwezifiso imihlane plastic.
The Moto G kuba manzi ezindinganisweni IP67 noma 1m amanzi for 30 amaminithi, okusho ukuthi kuzoba emihle uma uphonsa it in the bath noma babambeka imvula.
Ikhamera okwazi sokudla isibhamu okungaphezu kwe-avareji kodwa kukhona slot microSD ikhadi yokwengeza imemori uma 8 noma 16GB esakhelwe akwanele.
Isinqumo: the balance best of izindleko ukuzwa kuyatholakala
Motorola Moto G (3rd Gen) ukubuyekeza: the best isabelomali smartphone got nje ngcono
Ubuchwepheshe Hambayo slogs it out in the empini ngenxa imfanelo kokulandela
35222	1 I-Apula, Isigaba, Computing, Google, Internet, iPhone 6s, Omakhalekhukhwini, Samsung, Izibuyekezo, Samsung, Samuel Gibbs, Smartphones, Sony, Technology, Telecoms, Wazama futhi lwahlolwa
← New smartphone battery Ungakhokhisela ukuze 48% emizuzwini emihlanu Ingabe ngempela utshwala azwe ngcono embhedeni? →